पुष ६ गते सोमबार, कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल ! | सुदुरपश्चिम खबर
पुष ६ गते सोमबार, कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries
सामाजिक रूपले लोकप्रियता तथा ख्याति बढने सम्भावना छ। व्यापारमा लाभ प्राप्त हुनेछ। शुभ कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछ। मध्यान्हपछि स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ। परिवारका सदस्यहरूसँग मदभेद हुनसक्छ। सवारी चलाउँदा विशेष सावधानी अपनाउनुहोला।
वृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, तपाईं कुनै पनि प्रकारको मानसिक बोझबाट स्वतन्त्र हुनुहुनेछ। तपाईंको स्वास्थ्य पनि शारीरिक रूपमा राम्रो हुनेछ। पारिवारिक जीवनमा पनि आनन्द र सन्तुष्टि अनुभव गर्नुहुनेछ। व्यवसायमा ख्याति प्राप्त हुनेछ। तपाईंको कामको सराहना हुनेछ। सामाजिक क्षेत्रमा तपाईंको प्रतिष्ठा बढ्नेछ।
मिथुन – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह (Geminiकार्यक्षेत्रमा उच्च पदाधिकारीसँग वाद-विवाद हुनसक्छ। अधिक खर्च हुने सम्भावना छ। व्यापार क्षेत्रमा वातावरण राम्रो हुनेछ। मध्यान्हपछि शारीरिक र मानसिक स्थितिमा अनुकूल परिवर्तन हुनेछ। धन प्राप्तिको राम्रो योग रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा सुख-शान्ति रहनेछ।
कर्कट – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो (Cancer) अनैतिक कार्य तथा नकारात्मक विचारबाट टाढा नै रहनुहोला। वाणीमा संयम राख्न जरूरी देखिन्छ। शारीरिक तथा मानिसक अस्वस्थता राहना सक्छ। परिवारमा नकारात्मक वातावरण रहनेछ। सन्तान सम्बन्धि विषयले चिन्ता बढ्न सक्छ।
सिंह – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे (Leo) स्वास्थ्यको हिसाबले दिन सकारात्मक रहनेछ। आफन्त तथा साथी-भाईसँग घुमघाम गर्ने मौका मिल्नेछ। सामाजिक क्षेत्रमा मान-सम्मान बढ्ने योग रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा सकारात्मक वातावरण रहनेछ। परिवारमा वाद-विवाद उत्पन्न हुनसक्छ, सजग रहनुहोला।
यस दिन तपाईंको प्रकृतिमा केहि बढी संवेदनशीलता हुनेछ। व्यावसायिक सफलता मिल्नाले मन प्रशन्न रहनेछ। माइती पक्षबाट शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। पारिवारिक सुख-शान्ति कायम रहनेछ। रमणीय यात्राको सम्भावना छ।
बौद्धिक तथा लेखन कार्यमा मन लाग्नेछ। विचारहरूमा छिटो परिवर्तनको कारण तपाईं मानसिक रूपले स्वस्थ रहन सक्नुहुनेछैन। आकस्मिकता खर्चको योग छ। यात्रा गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनुहोला। व्यवसायको क्षेत्रमा सहयोगीहरुबाट राम्रो सहयोग प्राप्त गर्नु हुनेछ। पारिवारिक वातावरण रमाइलो हुनेछ।
विद्यार्थीहरूका लागि दिन अनुकूल रहनेछ। नयाँ कपडा र सौन्दर्य प्रसाधनको पछाडि खर्च हुनेछ। वित्तीय योजना तयार पार्न सजिलो हुनेछ। मध्यान्हपछि वैचारिक स्थिरता हुनेछैन। नयाँ कार्य सुरु गर्नको लागि दिन शुभ छैन। स्वास्थ्य सामान्य रहनेछ।
शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। परिवारका सदस्यहरुसँग आनन्दमय समय बित्नेछ। छोटो यात्राको सम्भावना छ। मध्यान्हपछि शारीरिक र मानसिक रूपले चिन्तित महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईं सौंदर्य प्रसाधन, घर सजावट र मनोरन्जनका साधन खरीद गरिनेछ।
अनावश्यक वाद-विवादमा नपर्नुहोला। धार्मिक कार्य र पूजामा खर्च हुन सक्छ। परिवारका सदस्यसँग मनमुटाव हुनसक्छ। वाणीमा संयम रख्नुहोला। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। भाग्यवृद्धिको योग रहेको छ। छोटो यात्राको योग बन्नेछ। प्रियजनसँगको भेटले मन प्रशन्न रहनेछ।
कुनै पनि नकारात्मक भावनाहरूलाई महत्त्व नदिइ मानसिक रूपमा स्वस्थ रहने प्रयास गर्नुहोस्। शारीरिक स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। मध्यान्हपछि धार्मिक कार्यहरूप्रति आकर्षण बढ्नेछ। विद्यार्थीहरूको लागि दिन अनुकूल रहनेछ। धन लाभ मिल्ने सम्भावना छ।
यस दिन लेनदेन गर्ने बेला, पैसा उठाउँदा वा लगानी गर्दा सावधान हुनुपर्छ। बोली र क्रोधमा संयमित हुनुहोस्। मध्यान्हपछि स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। धार्मिक र आध्यात्मिक प्रवृत्तिप्रति झुकाव बढ्नेछ। पारिवारिक वातावरण आनन्दमय रहनेछ। साथीहरूबाट उपहार प्राप्त हुनेछ।
चोखो मनले ९ लाख बति बालेको फोटोलाई छोएर ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस सारा दुख पाप काटिनेछ ॐ ॐ ॐ !!!